Ahoana ny fandoavana vola amin'ny tobin-tsolika amin'ny iPhone | Vaovao IPhone
Ahoana ny fandoavana vola amin'ny tobin-tsolika amin'ny iPhone
Tonga i Apple Pay herinandro vitsivitsy lasa izay hanamorana ny fandoavam-bola amin'ny finday. Saingy tsy ny rafitra fandoavam-bola irery ihany no azo ampiasaina amin'ny iPhone, ary mihamaro ny orinasa mampiasa fomba hafa handoavana ny vokatra avy amin'ny iPhone, nefa tsy mila mitondra ny karatra na miaritra filaharana eo amin'ny kaontera miandry ny fiampangany azy ireo. antsika. Ny tobin-tsolika dia isan'ny toerana nihanihan'ity fomba fandoavam-bola ity, ary efa misy orinasa maromaro manana ny fampiharana azy manokana handoa vola amin'ny iPhone..
1 Mahazo aina sy tsotra
2 Repsol, Cepsa ary Carrefour, fa maro kokoa no ho tonga
Mahazo aina sy tsotra
Inona avy ireo tombony azo avy amin'ity rafitra fandoavam-bola ity? Raha mijery ny rafitra fandoavam-bola nentim-paharazana isika, dia mamonjy ny tenantsika tsy maintsy mitondra vola miaraka amintsika, na mila mameno ny portfolio misy antsika amin'ny carte de crédit, ny carte dealité ary ny toy izany. Fa na dia mijery ny Apple Pay aza ianao dia mora kokoa io fomba fandoavam-bola io, satria tsy mila mivoaka ny fiara akory isika vao mandoa (tsara, hametraka ny lasantsy eny).
Tsotra be ilay fandidiana, mila misoratra anarana amin'ny serivisin'izy ireo fotsiny ianao miaraka amin'ny angona mailaka mahazatra sy ny zavatra hafa. Rehefa voasoratra ara-panjakana Tsy maintsy manampy fomba fandoavam-bola mety isika, ary hampiasa ny rindranasa namboarina hampiasaina isaky ny mila izany.
Ny rindranasa rehetra dia miasa amin'ny fomba mitovy amin'ny iray aseho amin'ny horonantsary: ​​tonga eo amin'ny tobin-tsolika izahay, misafidy paompy, manondro ny vola ary mandoa. Izao fotsiny isika dia mila mameno ny vola apetraka amin'ny vola efa nambarantsika ary afaka miala isika nefa tsy mila mandeha amin'ny fizahana, satria ny fandoavam-bola dia hatao amin'ny alàlan'ny karatra ampiasainay amin'ny fampiharana.
Repsol, Cepsa ary Carrefour, fa maro kokoa no ho tonga
Amin'izao fotoana izao ny fampiharana izay hitanay izay mamela anay hanao io fandoavam-bola io amin'ny finday dia telo: Kitiho Repsol, Cepsa Pay ary Mi Carrefour. Saingy tsy manana fisalasalana izahay fa hisy rindranasa vaovao hampiana tsy ho ela izay mamela ireo fandoavam-bola ireo amin'ny finday. Ireto ny rohy fampidinana ireo rindranasa iPhone.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Ahoana ny fandoavana vola amin'ny tobin-tsolika amin'ny iPhone
Photicon dia manolo ny sarin'ny app Photos amin'ny fisamborana farany azontsika (tweak)